တရုတ်ထုတ် ပြိုင်ကားအတုစီးလို့ အွန်လိုင်းကချစ်သူကိုစွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့ တရုတ်မိန်းကလေး – Cele Channel
ဘယ်တော့မှ မမေ့နိုင်တဲ့ မှတ်ဥာဏ်တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ထားလို့ အခက်တွေ့နေတဲ့ အမျိုးသမီး
Posted on December 25, 2017 Author Cele
အမေရိကန်က အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ ဘယ်တော့မှ မမေ့နိုင်တဲ့မှတ်ဥာဏ်တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ထားလို့ အခက်တွေ့နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါဟာ တကယ့်ကိုပဲ အံ့အားသင့်စရာနဲ့ ထူးခြားတဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ပါ။ မှတ်ဥာဏ်နဲ့ ဦးနှောက်မှတ်သားဥာဏ်ရည်ကောင်းမွန် ချင်တဲ့သူတွေကြားမှာ အခုလိုမျိုး ဘယ်တော့ မှ မမေ့တတ်တဲ့ မှတ်သားဥာဏ်ရည်၊ ဦးနှောက်မှတ်ဥာဏ်တွေရနေတဲ့ ရေဗက္ကာဆိုသူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ စူပါမှတ်ဥာဏ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ် အဆိုပါအမျိုးသမီးဟာဆိုရင် သူမရဲ့ ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာရာတိုင်းရဲ့ အသေးစိတ်အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံး ကို တစ်ခုမကျန် အကုန်မှတ်မိနေတာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ထူးခြားပြီးဆန်းကြယ်တဲ့လက္ခဏာအခြေ အနေကို ဟိုက်ပါသိုင်းစီးရား(Highly Superior Autobiographical Memory) လို့ ခေါ်ကြပြီးတော့ ဒါဟာ သာမန်မဟုတ်တဲ့ အခြေအနေနဲ့ အကြောင်းအရာအဖြစ်အပျက်အတိုင်းကို အကုန်မှတ်မိနေခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ […]
ကမ္ဘာ​ပေါ်မှာ ရှိလိမ့်မယ်လို့တောင် ထင်မထားနိုင်တဲ့တဲ့ ဆန်းကြယ်သောအတွဲများ
Posted on January 21, 2018 January 21, 2018 Author Cele
ဒီလိုထုးဆန်းတဲ့ အခြေနေမျိုးတွေနဲ့ အတွဲတွေ တစ်နေရာမှာတကယ်ရှိနေပါလား။ သူတို့တွေရဲ့ဆုံစည်းမှုဟာ ဒီလိုဆန်းကြယ်ပါလားဆိုတာကို အများကြီးမဟုတ်ရင်တောင်နည်းနည်းလးတော့အံ့သြမှင်သတ်စေနိုင်တဲ့အတွဲတွေကိုစုစည်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်… 1. Joelison and Evem သူတို့အတွဲမှာယောင်္ကျားဖြစ်သူဟာ အသက်၂၈နှစ်အရွယ် အရပ်၂.၃၀မီတာ ရှိပြီးသူ့မိန်းမဖြစ်သူနဲ့ မတရားအရပါကွာတဲ့အတွဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အတွက်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကွာခြားချက်ဟာပြဿနာမဟုတ်ပဲတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်သူငယ်ချင်းလိုပါပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေရင်းစောင့်ရှောက်ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အကြောင်းကို သိပ်ပြီးလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကို အပြည့်အစုံချပြလေ့မရှိပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကို ကဲ့ရဲ့တဲ့ Fanတစ်ချို့ရဲ့စကားတွေကိုကြောက်လို့လို့ဖြစ်ပါတယ်။ 2. Maria, Paul and … Peter အမျိုးသားနှစ်ယောက်နဲ့တူတူနေထိုင်တဲ့ ဆန်းကြယ်တဲ့ မိန်းကလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထက်ပို ဆန်းကြယ်တာက သူရဲ့ချစ်သူရောသူ့ယောင်္ကျားရောက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဖေးမကူညီကြပြီး၊ အချင်းချင်းနားလည်ပေးနို်င်တယ်လို့သိရပါတယ်။မိန်းကလေးဖြစ်သူရဲ့အကြောင်းပြချက်ကတော့ တစ်ဖက်ကချစ်သူရော ယောင်္ကျားရောကို မစွန့်လွှတ်နိုင်ပဲရွေးချယ်ရခက်တာကြောင့် နှစ်ယောက်လုံးနဲ့တူတူနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ လိင်မှုဆက်ဆံတဲ့အခါလည်းယောင်္ကျားလေးနှစ်ယောက်ဟာ စည်းကမ်းရှိရှိနဲ့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် နားလည်ပေးတာကြောင့် ဒီမိသားစုမှာမိန်းမဖြစ်သူဟာ ကြည်နူးပျော်ရွှင်ရပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးရင်သွေးလေးမွေးလာရင်ဘယ်သူ့အဖေခေါ်ရမှန်းမသိဖြစ်နိုင်ပင်မဲ့ သူတို့ရဲ့မတက်နိုင်တဲ့ အခြေနေကိုနားလည်ပေးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပြီး လက်ရှိပုံစံအတိုင်းပဲဆက်လက်နေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ 3. Sanele and Helen အသက်၈နှစ်အရွယ် Sanele […]